जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. १२ नैन्हीमा सोमबार बृहत सरसफाई गरिएको छ । जलेश्वर नगरपालिका १२ भारतीय सिमा नाकामा पर्दछ । जहाँ १० दिनदेखि झाडापखालाको प्रकोपले महामारीकै रुप लिएको छ । नैन्ही गाउँमा ३ सय मुस्लिम घरपरिवारको बस्तीमा झाडापखालाको प्रकोप देखिएको छ । झाडापखालाले ४ वर्षीया खुश्बु खातुनको गत भदौ ३० गते मृत्यु भएको थियो ।
गएको भदौ २५ गतेदेखि नैन्ही गाउँका मुस्लिम टोलमा झाडापखालाको प्रकोप देखिएको छ । सुरुमा विरामीहरु भारतीय सिमा नजिकै भएकाले भारतको सरसण्डमा उपचार गराए तर एकपछि अर्को विरामीको संख्या बढदै जाँदा वडाअध्यक्ष रामतपेश्वर ठाकुरले मुस्लिम समुदायद्धारा संचालित मदरसामा क्याम्प राखेर उपचारको व्यवस्था गरेका थिए ।
डा. सुवोध मिश्राको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय चिकित्सकको टोली २४ सै घण्टा विरामीको उपचारमा जुटेका छन । सोमवार दिउसो १२ बजेसम्म यस क्याम्पबाट २ सय २८ जना विरामीलाई उपचार गरिएको छ । १८ जना विरामीलाई थप उपचारका लागि जलेश्वरस्थित जिल्ला अस्पताल रेफर गरिएको छ भने ५० जना विरामीलाई स्लाइन पानी गरि उपचार गरिएको उपचारमा संलग्न डा. मिश्राले बताए ।
के भन्छ स्थानियबासिन्दा ?
जलेश्वर नगरपालिकाको नैन्ही गाउँ भारतीय सीमासंग जोडिएको छ । नैन्ही गाउँका अधिकांश मान्छेहरुको प्रशासनिक कामकाज बाहेक घरायसी सरसमान किनमेल भारतीय बजारबाट हुने गरेको छ । गत भदौ २५ गतेतिर गाउँमा भारतीय बजार सुरसण्डबाट एक भारतीय माछा ब्यापारी सानो माछा लिएर गाउँमै आएका थिए । माछा बेच्न आएका ती व्यापारीले १०० रुपैया नेपालीमा ३ किलो माछा बेचेर गएको स्थानिय राजु यादवले बताए । विषादीयुक्त धानखेतबाट संकलन गरिएको आशंका गरिएको ती माछा खाएपछि स्थानियबासिन्दामा झाडापखालाको प्रकोप देखिएको नैन्हीका वडाअध्यक्ष रामतपेश्वर ठाकुरले बताए । कुहिएको माछा खाएको कारणले झाडापखाला लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएपनि काठमाण्डौबाट आएका चिकित्सक टोलीले विरामीको दिसा,पिसाव, रगत र खानेपानीको सेम्पल लगेको र सो रिर्पोट आएपछि थप जानकारी आउने जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रले बताए । हाल नगरपालिकाले विरामीको स्वास्थ्य चेकजाँचको लागि एमविविएसको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली खटाएको मेयर मिश्रले बताए ।
सोमवार जनकपुरबाट डाक्टरसहित सरसफाई अभियानीहरु नैन्ही गाउँ पुग्दा स्थानियबासिन्दाको घर, आंगन दुर्गन्धित थियो । नैन्हीमा सामान्य खान पकाउने (भान्छा कोठा), सुत्नेकोठा, खानेपानी, नुहाउने र भाडावर्तन मस्काउने पोखरी दुर्गन्धित छ । जनकपुरबाट गरिव असहाय मंचका अध्यक्ष बैधनाथ साह र दिपक ठाकुरको नेतृत्वमा गएको टोलीले झाडापखाला प्रभावितको घरमा पुगेर सरसफाइ गर्दै सरसफाइको महत्व र सरसफाइको फाइदाबारे जनचेतना फैलाएका छन ।
सरसफाई टोली गाउँमा पुग्दा स्थानियबासिन्दाको खानपकाउनेदेखि लिएर सुत्ने कोठा, नुहाउने पोखरी र भाडाबर्तन मस्काउनेसम्मको स्थल निकै फोहोरले भरिएको थियो । घरको अधिकांश घरमा चर्पी भएपनि अधिकांश मान्छे शौच गर्न बाहिर सडक पेटीमै जाने गरेको स्थानिय युवा सेवा समितिका सचिव चन्दन कुमार झाले बताए । उनले सडकपेटीमै दिसापिसाव गर्ने गरेकाले गर्दा आफुहरुले वडा कार्यालयको समन्वयमा ६ जना स्वयमसेवक परिचालन गरेको बताए । तर पनि सरसफाईमा हामीले स्थानियलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौ ।
स्थानियबासिन्दाहरुको घरमा खानेपानीको टयुवेल छ तर पनि निकै नै दुगन्धित फोहोर पानी भएको पोखरीमा आएर नुहाउने गरेको छ । सो पोखरीको पानिमा नुहाउन त के छुन पनि नहुने खालको रहेको सरसफाई अभियानसगै जनकपुर अंचल अस्पतालबाट गएका डाक्टर सुधिर यादव र डा दिपेन्द्र मेहताले बताएका छन । गाउँमा फोहोरले दुगन्र्धित भई रहदाँ नाला व्यवस्थापन समेत नभएर नालाको पानि जमेर निकै समस्या देखिएको छ ।
झाडापखाला नियन्त्रण गर्न अmझै समय लाग्ने
नैन्ही गाउँमा झाडापखालाका विरामीको नियन्त्रण गर्न अझै समय लाग्ने उपचारमा सलग्न डाक्टर सन्तोष यादवले बताए । उनल भने अहिलेसम्म यस क्याम्पमा भर्ना भएकामध्ये असोज २ गतेका दिन २ पुरुष र १९ महिला गरि ४१ जना, असोज ३ गते १८ पुरुष, १९ महिलासहित ३७ जना, असोज ४ गते १७ पुरुष र १७ महिला गरि ३४ जनालाई उपचार गरि घर फर्काएको बताएका छन ।
त्यस्तै असोज ५ गते २१ जना पुरुष, २७ जना महिला, ६ गते ११ पुरुष १५ जना महिला गरि २६ जना, असोज ७ गते १८ जना पुरुष र २० जना महिला गरि ३० जनालाई सफल उपचार गरिएको उपचारमा सलग्न डाक्टर सुवोध मिश्राले बताएका छन । डाक्टर मिश्राका अनुसार अहिले पनि दैनिक मान्छेहरु झाडापखालाका विरामी भई क्याम्पमा उपचारका लागि आउदै गरेकाले पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न हप्तौ लाग्ने बताएका छन । उनले भने क्याम्पमा आएपछि अहिलेसम्म एक जना बाहेक सवैलाई बचाउन सफल भएको बताएका छन ।